Nanomboka ny tolotra fitaterana haingam-pandeha ny zotra mampitohy an’i Yaoundé sy Douala · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraNestor Nga Etoga
Voadika ny 01 Febroary 2020 13:23 GMT
Garan'i Bawa, akaiky an'i Ngaoundéré. Sary: Nestor Nga Etoga.
“Nihoatra ny 100.000 ireo mpandeha tao amin'ny orinasa Camrail ny 22 aogositra 2014″, hoy ireo tomponandraikitra.
Nanomboka tamin'ny fampandehanana ny Fiarandalamby InterCity ny 3 Mey 2014, “444” ireo fiarandalamby nahasarika olona” ; hoy ireo tomponandraikitra ao amin'ny Camrail.
Ho an'i Dieudonné Gaibai, tomponandraikitry ny fifandraisana ao amin'ny CAMRAIL :
Manodidina ny 95 % ny taham-pahafenoana ao amin'ny kilasy voalohany ary 75 % kosa ny ao amin'ny Premium ho anà mpandeha eo amin'ny 1.400 eo taterina isan'andro, miaraka aminà zotra maharitra eo amin'ny 3ora 30 minitra eo. Nanome fahafahana mpanjifa maherin'ny 100.000 eo hiaina izany atao hoe fiarandalamby mampahazo aina, haingana sy hieren-doza izany io tolotra fitaterana mampifandray tsy tapaka an'i Yaoundé sy Douala anatin'ny 3ora 40 minitra io, ary anaty filaminana tanteraka.
ny fiarandalamby Innercity mampifandray an'i Yaoundé sy Douala nalaina tao amin'ny Cameroon online – sehatra ho an'ny daholobe
Ankoatra izay, misy tolotra “fihinanana tsakitsaky” atolotra ao anatiny sady afaka mampiasa tablettes voatokana ho an'ny fialamboliny ireo mpandeha. Nanamarika i Hamadou Sali, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Camrail, fa :
Na eo aza ireo vokatra ireo, mbola misalasala ireo Kameroney sasany. Mametra-panontaniana vitsivitsy i Fergusson :
Ndeha hojerena izay ho bikan'izany rehetra izany ato anatin'ny enim-bola mialohan'ny hitsaràna. Na izany na tsy izany, tsara raisina foana saingy mahavariana ihany hoe 50 taona taorian'ny atao hoe fahaleovantena dia mbola mankalaza ny fampandehanana fiarandalamby ihany isika.
Manampy i Nkunkuma2 ao amin'ny fizarana fametrahana fanehoankevitra :
Ho anà saram-pitaterana manomboka amin'ny 9.000 fcfa ho an'ny vip sy 6.000 fcfa ho an'ny kilasy premium. Manonofy ve aho sa inona izany resaka izany ?
265 km anatin'ny efa ho adiny 4 dia miresaka fanavaozana isika ato anatin'ny taonjato faha-21 izay efa hahatratraran'ireo fiarandalamby ny 300kmh ? Shangai-Pekin, manodidina ny 1318km latsaky ny adiny 5. Mampitsiriritra e ?
Mijery ny lafiny tsara kosa i Arthur Wandji ao amin'ny News du Camer :
Tombony ny fananana io fiarandalamby io, tsy eo amin'ny fnamoràna ny fivezivezen'ny Kameroney avy any amin'ireo tanàna roa voakendry ireo fotsiny ihany, fa ho an'ny fivoaran'ireo fotodrafitrasa ao Kamerona ihany koa.